Puntland oo xal ka gaartay xiisad dagaal oo ka taagneyd degaano ka tirsan Gobolka Sool - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Puntland oo xal ka gaartay xiisad dagaal oo ka taagneyd degaano ka...
Puntland oo xal ka gaartay xiisad dagaal oo ka taagneyd degaano ka tirsan Gobolka Sool
Xiisada Colaadeed ayaa waxaa ay ka taagneyd degaanka Dhuumood ee Gobolka Sool, waxaana ay u dhaxeeysay laba beelood oo isku heystay dhul-daaqsimeed iyo Ceelal ku yaal degaankaas, waxaana ku baxay mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Puntland.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha gudaha Maamulka Puntland, Xildhibaano ka tirsan Puntland, mas’uuliyiinta Maamulada Gobolada Sool iyo Nugaal iyo saraakiil ayaa qeyb ka ahaa xalinta beelaha colaada u dhaxeeysay, kuwaas oo Odayaal ka socday hal goob isugu keenay.
Sidoo kale Mas’uuliyinta ka socday Maamulka Puntland ayaa waxaa ay ku guuleysteen inay kala qaadaan labada maleeshiyo Beeleed ee isku hor-fadhiyay degaanka Dhuumood ee Gobolka Sool.
Mas’uuliyiinta ayaa waxaa ay ugu baaeen Odayaasha Dhaqanka labada Beelood inay dhaqan geliyaan heshiiska ay gaareen, si Bulshada ku nool degaanka lagu dagaalamay ay nabad ugu wada noolaadaan.
Degaano ka tirsan Gobolka Sool ayaa waxaa dhowr jeer kusoo laab laabtay dagaal Beeleedyada, kuwaas oo sababay dhimashada dad badan iyo barakaca Boqolaal Qoys oo ku noolaa degaannadaas.
Previous articleThierry Henry oo isaga baxay baraha bulshada
Next article15 qof oo COVID-19 ugu geeriyootay degaan ka tirsan Gobolka Galgaduud